ပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာနHaydarpaşaရထားဘူတာစာချုပ်များတောင်းဆိုဖို့ဖြစ်တယ်! : နုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ရှင်းပြ၏ TCDD Sirkeci နှင့်Haydarpaşaဘူတာယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာဖြစ်ရပ်များအချို့အစိတ်အပိုင်းများတွင်အသုံးပြုရန်ငှားဖို့အောက်တိုဘာလ4တှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည် [ပို ... ]
2011-2023 Yıllına Kadar Nerelere Hızlı Tren Hattı Yapılacak : 2023 yılına kadar 29 kente hızlı tren gelecek, 1.5 gün süren Edirne-Kars yolculuğu ise 8 saate inecek. 45 Milyar dolara mal [ပို ... ]
စက်မှုနဲ့လည်းတူရကီ၏သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာသုတေသနကောင်စီ (TUBITAK) ၏ပါဝင်မှုနှင့်တူရကီပြည်နယ်မီးရထားသမ္မတနိုင်ငံနှင့်အတူကျင်းပနည်းပညာဝန်ကြီး Mustafa Varank, ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Cahit Turhan (TCDD) တွင် [ပို ... ]
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကအစ္စတန်ဘူလ်၏ညဉ့်အစေခံရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည့် Marmaray 24 နာရီအကြာတွင်လွှဲပြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသတင်းအချက်အလက်ဝန်ကြီးဌာနထိတ်လန့်ခံစားခဲ့ရ! Marmaray နာရီ 24 ခဲ့ပါဘူး။ IMM မြေအောက်ရထားသောကြာနေ့နှင့်စနေနေ့ 24 [ပို ... ]
YHT လက်မှတ်များ | မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလက်မှတ်များ - မြန်နှုန်းမြင့်ရထားကြိုတင်မှာကြားခြင်း: ဖုန်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်သင်ကeဘွတ်ကင်လုပ်ရန်စဉ်းစားနေလျှင်သင်အသင်းဝင်ရန်လိုအပ်သည်။ TCDD - Internet - User Registration Screen ပုံစံဖြည့်ရန်အသင်းဝင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ [ပို ... ]
စက်ခေါင်းအရေအတွက် 331 ထုတ်လုပ်မှု OSB များအတွက်အဓိကထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ တူရကီအတွက်အရေးကြီးသောအဖွဲ့အစည်းများသင့်လျော်သောရထားလမ်းအခြေခံအဆောက်အအုံ OSB မှီဖို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ပါလိမ့်မယ်။ တူရကီရဲ့ OSB သံကွက်တွေနဲ့တည်ဆောက်ထားလိမ့်မည်။ [ပို ... ]
Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; “Bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO)’nün İstanbul Havalimanı’nı güvenlik zaafiyetleri çerçevesinde incelemeye aldığı yönündeki asılsız iddialar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli [ပို ... ]
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံများဝန်ကြီးဌာန CHP Tanrikulu ထံမှတုံ့ပြန်မှုသည်နှင့်အညီနောက်ဆုံးသုံးနှစ်ကြာအစားအသောက်ဝယ်ယူမှုများအတွက်မေးဝန်ကြီးဌာနအစားအစာစားသုံးမှု၏သန်းတထောင် 2016 2019 114-406 နှစ်အကြားတန်ဖိုးရှိဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ န်ဆောင်မှုများ၏စားနပ်ရိက္ခာဝယ်ယူမှု [ပို ... ]
မြန်နှုန်းမြင့်ရထားဘူတာများ - Eskişehirနှင့် Ankara ကြားရှိအမြန်ရထားလမ်းနှင့်Eskişehirမှ 16.35 မှထွက်ခွာသွားသောမြန်နှုန်းမြင့်ရထားကိုPolatlıရှိ 1 တွင်လစဉ်ရပ်နားသည်။ ခရီးသည်အလုံအလောက်ရှိပါကအမြဲတမ်းရပ်နားလိမ့်မည်။ မြင့်သော [ပို ... ]
Yaşanan ölümlü kazaların ardından aileler ihmali bulunan görevlilerin cezalandırılmasını beklerken Ulaştırma Bakanlığı’nda demir yollarından sorumlu genel müdür vekilinin, yardımcılarının ve Bakan Yardımcılarının Bakanlığa bağlı şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yaparak çift [ပို ... ]